सपिङ मल र यसको सफल व्यवस्थापन « रिपोर्टर्स नेपाल
–उज्वल केसी, मल व्यवस्थापक
पाँच वर्षयता देशकै प्रतिष्ठित सपिङ मलहरु लबिम मल (LABim Mall) र चौधरी ग्रुपद्वारा सञ्चालित सिजी ल्यान्डमार्क (CG Landmark) मलको सुरुआती समयदेखि नै त्यसको स्थापना र व्यवस्थापन गर्ने अवसरले गर्दा छोटो समयमै मैले धेरैभन्दा धेरै अनुभव र सीप हासिल गर्ने मौका पाएको छु । हालसम्म हरेक दिन नयाँनयाँ कुरामा प्रखरता हासिल गर्दै मल व्यवस्थापन सम्बन्धी मैले सिकेका केही मूलभूत कुराहरु प्रस्ट्याउने कोसिस गरेको छु ।
मल (Mall) के हो ?
भाडामा लगाउँदा अथवा बेच्दा विशेष ध्यान दिनुपर्ने चिज भनेको (Proper Tenant Mixup) हो । भविष्यमा हुन सक्ने अनावश्यक In-house प्रतिस्पर्धा तथा Ease of access in shopping का लागि Tenant Mix एकदमै महत्वपूर्ण पाटो हो । जस्तैः जुत्ताको लागि निश्चित ठाउँ, ब्रान्डका लागि निश्चित ठाउँ, रेस्टुरेन्टका लागि अलग ठाउँहरुको बाँडफाँटले गर्दा ग्राहकहरु झुक्किँदैनन् । साथै उक्त क्षेत्र वस्तु विशेषको हब बन्छ । र व्यापार पनि बढ्छ ।
८. पार्किङ (Parking)
१२. सूचना प्रविधि (IT)
मलले विभिन्न शीर्षकमा आम्दानी गर्छ । मासिक/वार्षिक भाडा नै मुख्य आम्दानीको स्रोत हो । साथै ब्रान्डिङ, प्रवद्र्धनात्मक गतिविधि, CAM, बत्ती इत्यादिबाट पनि आम्दानी हुन्छ ।
मलको प्रगतिका लागि प्रतिष्ठा र ब्रान्डिङलाई सदैव ख्याल राख्नुपर्छ । सार्वजनिक स्थल भएकाले सर्वसाधारणलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सेवा, सुविधामा कुनै पनि खाले सम्झौता गर्नु हुँदैन । साथै Sub-lease सबलिज, अनावश्यक In-house Competition, समय तालिकामा पसल नखोल्ने, Improper tenant mix, बजारमा भन्दा बढी महँगोमा वस्तु र सेवा बिक्रीले सपिङ मललाई धराशयी बनाउन सक्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ ।
सपिङ मलले व्यापारीको मात्र नभई मुलुकको समग्र आर्थिक प्रगतिमा निकै ठूलो भूमिका निर्वाह गर्दछ । एकै छानामुनि न्यूनतम सयदेखि हजारजनासम्मले प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष रुमा रोजगारी पाएका हुन्छन् । मलभित्रको व्यापारिक गतिविधिबाट राज्यलाई करोडौं राजस्व प्राप्त हुन्छ । सर्वसाधारणको हकमा एकै छानामुनि सबै आवश्यकताको परिपूर्ति प्रतिस्पर्धी मूल्यमा गर्न सकिन्छ । तसर्थ सपिङ मललाई जीवित राखी भावी दिनमा अरु लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन दिन आवश्यक पूर्वाधार तथा नीति नियमको आवश्यकता देखेको छु ।
बढ्दै गएको एकीकृत सहर, ब्यस्त जीवन र सुविधामुखी ग्राहकरु बढ्दै गएका कारण नेपालमा धेरै प्रमुख सहरहरुमा सपिङ मलहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । निकै सुविधासम्पन्न मलहरु सञ्चालनको तयारीमा छन् । ब्यस्त जीवनशैलीमा कम समयमै एउटै छानामुनि सम्पूर्ण सुविधा पाउँदा ग्राहकहरु निकै आकर्षित हुन्छन् । साथै समय समयमा हुने पर्व विशेष कार्यक्रमहरुले अलग्गै आनन्द दिने हुँदा पनि ग्राहकहरु मलतर्फ तानिँदै छन् । साथै सपिङ मलहरुमा विश्वविख्यात ब्रान्डहरु पनि आ–आफ्नो Outlet खोल्ने दौडमा देखिँदा ‘ब्रान्डहरु भनेकै सपिङ मलमा पाइन्छ’ भन्ने मान्यता स्थापित हुँदैछ ।